Emily Brontë. Ede ịhụnanya atọ maka afọ 200 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Emily Brontë. Ekele ịhụnanya atọ maka afọ 200
Ihe osise nke Emily Brontë site n'aka nwanne ya nwoke bụ Patrick Bramwell Brontë. Ihe odide nke uri uri.
Taa, Julaị 30, anyị na-eme ncheta ọmụmụ ọhụụ nke Emily Brontë, onye na-ede akwụkwọ Bekee na onye na-ede uri, nke otu usoro ama ama ama ama ama nke akwụkwọ ozi Saxon. Ememe pụrụ iche n'ihi na ha dị 200 afọ. Agagh echete ya ebighebi dika odee na kpochapụwo nke Victoria ịhụnanya akwụkwọ bụ Wuthering elu, ya naanị akwụkwọ. Mana odikwa mkpa iji mesie akuko uto ya nke amaghi, ma obu nke ekpuchidoro, n'ihi oke ya dika onye ode akwukwo. Ya mere, ana m anapụta ndị a atọ love poems nke gi iji too ebe nchekwa gi ozo.
1.2 Soro m jee ije
1.4 Ili nke ada m
1.5 Kedu mgbe m ga-ehi ụra
Amụrụ na July 30, 1818 en Thornton, Yorkshire, na-esote ụmụnne ya ndị nwanyị Charlotte (Jane eyre) na Anne (Agnes Gray), otu n'ime isi ihe edere banyere akwụkwọ ịhụnanya ndị Victorian. Existencedị adị ya, dị ka nke ụmụnne ya ndị nwanyị, gosipụtara akara a siri ike nwata, a ezi omume, ọnwụ mbụ nke nne ya na ụmụnne ya ndị nwanyị ndị tọrọ ya, ndị austerity nke nna ụkọchukwu Anglịkan na ndụ nsogbu nke nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ Branwell. Dị nnọọ ndụ 30 afọ ma hapụ a Ihe odide ederede pere mpe ma pere mpe na ogo ya na mmetụta ya.
Site na ogwu nke amuru site na uwa ozo nke ana akpo Gondal, nke o kesara ya na nwanne ya nwoke Anne, ihe ndi ahu nke ịhụnanya site n'aka Emily Brontë ha na-agwakọta mmetụta na-erubiga ókè na isi ihe dị na ịhụnanya uri nwere ọtụtụ njirimara nke ga-emesị bụrụ isi na uri uri Victoria.
Ọzọkwa, ndị ụgwọ na ike nke odide ya na amaokwu ya ihe mbu nke ihe ga-emesia bu uzo ya na akwukwo akwukwo Wuthering elu. Kpọmkwem, ihe odide nke Heatcliff, Catherine Earnshow ma ọ bụ Edgar Linton ka amatalarị n'ụfọdụ. Mana tupu uri ndi ahu adi jikọtara ọnụ site na ụmụnne nwanyị atọ n'okpuru nwoke aha. Na agbanyeghi na ha emeghi nke ọma, ha kụrụ mkpụrụ ahụ.
Ndị a bụ ndị atọ Emily binyere aka.
Soro m jee ije
nání gi gọziri nkpuru-obi na-adịghị anwụ anwụ.
Anyị na-ahụkarị abalị oyi mma
Na-agagharị na snow na-enweghị ndị akaebe.
Ànyị ga-alaghachi n'ihe ụtọ ndị ochie ahụ?
Igwe ojii na-agba ọsọ
dị ka ọtụtụ afọ gara aga,
ruo mgbe m nwụrụ na ọhịa
na gigantic stacked nkanka;
ka ọnwa ọnwa n’aba
dị ka ịmụmụ ọnụ ọchị, ọchị ọchị.
Bịa, soro m jee ije;
O teela anyị biri
mana onwu zuru ụlọ ọrụ anyị
(Dị ka chi ọbụbọ si adịrị igirigi)
Otu n'otu na ọ tụbara tụlee n'ime chakoo
ruo mgbe ọ fọdụrụ naanị mmadụ abụọ;
ma mmetụta m ka na-agbapụ
n'ihi na n'ime gị ka ha nọgidere.
Ekwula na m nọ
Ndi mme owo ẹkeme ndidi akpanikọ?
Ifuru ọbụbụenyi ọ ga-ebu ụzọ nwụọ
ma gbanwee mgbe ọtụtụ afọ gasịrị?
Ee e, ọ bụ ezie na ha ji anya mmiri saa ha,
Mili olili ozu kpuchie ya,
Ndụ mmiri adịkwaghị agbapụta
na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ga-alaghachi.
N'nchebe karịa egwu ikpeazụ
-apụghị izere ezere dị ka n'okpuruala ụlọ
ebe ndi nwuru anwu bi na ihe kpatara ha,
Oge, na-adịghị akwụsị akwụsị, na-ekewa obi niile.
Ili nke ada m
Nnụnụ ahụ bi na chi ọbụbọ,
Nwa nke a na-amata ikuku dị jụụ,
A Theụ na-agba egwu n’etiti mgbịrịgba nke Heather
Na ha zoo Nwanyị m mara mma.
Mgbada ohia na obi ya oyi,
Nnụnnụ ọhịa na-eweli nku ha na-ekpo ọkụ;
Ọ na-amụmụ ọnụ ọchị na onye ọ bụla,
Ha ahapụwo ya naanị ya ịnọ naanị ya!
Echere m na mgbe mgbidi gbara ọchịchịrị nke ili ya
Jidere ụdị nwanyị na nwanyị ya siri ike,
Ọ dịghị onye ga-ewepụta obi ụtọ na-ebelata
Ephemeral Ìhè nke ọ joyụ.
Ha chere na ebili nke mwute ga-agabiga
Na-ahapụ ịhapụ ịdị n'ọdịnihu n'afọ ndị dị n'ihu;
Ma olee ebe nhụjuanya niile dị ugbu a?
Ebee ka anya mmiri gbara?
Ka ha lụọ ọgụ maka nsọpụrụ nke ume, +
Ma ọ bụ maka ọchịchịrị na obi ụtọ dị ike,
Onye bi na ala ọnwụ
Ọ na-agbanwe agbanwe na enweghị mmasị kwa.
Ọ bụrụkwa na anya gị na-ele anya na-ebe ákwá
Ruo mgbe isi iyi mgbu na-ata
Ọ gaghị alaghachi -nkpu ụra udo ya-
Ọ gaghịkwa eweghachi sụọ ude na-enweghị isi.
Fụọnụ ifufe ọdịda anyanwụ, fesie mkpọmkpọ ebe ahụ.
Murmur, iyi nke oge okpomọkụ!
Enweghị mkpa maka ụda ndị ọzọ
Iche nwunye m nche n'ebe izu ike ya.
Kedu mgbe m ga-ehi ụra
Oh, n'oge awa m ga-ehi ụra,
Aga m eme ya na-enweghị amata,
Achọghịkwa m ịma otú mmiri ozuzo si ezo ọzọ
Ma ọ bụ ọ bụrụ na snow ekpuchi ụkwụ m.
Eluigwe ekweghị nkwa ọ bụla
Ha nwere ike mezuo, ikekwe ọkara.
Hel na egwu ya,
Na icheku ya nke na-anaghị anyụ anyụ
Ọ gaghị edobe uche a.
Ya mere, asị m, ikwughachi otu ihe ahụ,
N'agbanyeghị nke ahụ, ruo mgbe m nwụrụ, m ga-asị:
Chi atọ dị n'ime obere osisi a
Ha na-alụ agha ehihie na abalị.
Eluigwe agaghị echekwa ha niile
Ha araparawo m n'ahụ́;
Ha ga-abụ nke m ruo mgbe e chefuru ha
Kpuchie nke fọdụrụ m.
Oh, mgbe oge chọrọ obi m ka m rọọ nrọ,
Agha niile ga-akwụsị!
N'ihi na ụbọchị ga-abịa mgbe m ga-ezu ike,
Nhụjuanya a agaghịzikwa emekpa m ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Emily Brontë. Ekele ịhụnanya atọ maka afọ 200
hi kedu nke na-eme
Zaghachi karla andreine
Chain Chain dijo
Enwere m mmasị na nka na nkọwa ya dị iche iche n'ihi na ejiri m n'aka na ha buru mkpụrụ obi nke onye dere ya.
Zaghachi Rocío Cadena
Icheta Herman Melville. 20 nkebi ahịrịokwu nke ọrụ ya